Wixii martida | February 2020
Sidee loo isticmaalaa boric acid for indhaha lagu duro?
Boric acid waa walaxda firfircoon ee qaabka budada kiniinka aan lahayn. Waxaa si fiican loo kala diraa dareere kasta. Daroogadan waxaa badanaa loo isticmaalaa daawada dhaqameedka si loogu isticmaalo hababka kala duwan ee xubnaha aragtida. Daroogada ayaa muddo dheer loo isticmaalay jeermiska. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo boric acid taxadar leh, sababtoo ah dhakhaatiirtu waxay aqoonsadeen dabeecadaha kale ee ka yimaada saameynta xalkan.
Talooyinka loogu talagalay isticmaalka boric acid ka soo finan
Boric (orthoboric) acid waxaa loo isticmaalaa daaweynta finanka sida antiseptic. Waxay ka mid tahay asiidhyada daciifka ah, ma laha dhadhan iyo urin, waa mid liitaa biyo lagu fili karo. Waan ognahay in ay tahay qamriga boric - 70% ethanol xal oo leh boris acid 0.5-3%. Daaweeynta finanka iyo finanku, ma aha oo keliya isticmaalka khamriga loo isticmaalo oo keliya, laakiin sidoo kale boomaatada, iyo sidoo kale "kalahadalay" kala duwan - joojin, oo aan ku jirin kaliya boric acid, laakiin sidoo kale daroogooyinka kale ee daaweeya maqaarka.
Boric acid waa antiseptic aad u fiican. In geedi socodka barar ah ee dhegta for instillation, waxaad isticmaali kartaa xal khamriga ah boric acid - 3 boqolkiiba. Muhiim maaha in aad is-daaweysid, laakiin hubi inaad la tashatid takhtar si aad u hesho ogaanshaha saxda ah. Cudurka dhegaha ee dhegaha waxaa la socda xanuunka ba'an ee adag in la adkeeyo.
Iska ilaali caafimaadkaaga: isticmaalka cadaadiska boric acid dhegaha
Daaweynta cudurada dhegta leh cadaadiska boric acid mar kasta waa la dhaqmaa. Isticmaalka cadaadis leh boric acid ayaa la barbar dhigi karaa jimicsiga jidhka, hase yeeshee, cadaadisku waa mid la heli karo, waana la isticmaali karaa iyada oo aan dhakhtar qorin. Marka xigta, waxaan kuu sheegi doonnaa nooca dharka caafimaadka, sida loo isticmaalo si sax ah, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada nidaamka.
Xaqiiqooyin muhiim ah oo ku saabsan boric acid iyo aalkolada magaca isla - ma daaweyn isku mid ah ama ma aha? Tilmaamaha codsiga
Dadka intooda badan way ku adagtahay in ay kala soocaan saddexda walax oo leh magacyo isku mid ah - boric acid, alkol boric iyo salicylic acid. Daawada, daroogada sida alkol boric waa loo isticmaalaa, waa xal loo yaqaan ethanol (70%) boric acid, diiradaas oo laga yaabo inay kudhacdo inta u dhaxaysa 0.5-5%.
Sifooyinka qallalan ee qalajiyaha korantada iyo mikrovelh: dooro heerkulka ugu fiican
Hawthorn waa hab fiican oo lagu yareyn karo walaaca. Kufsi yar oo berry ah oo lagu shubo shaaha aad jeceshahay, waxaad dareemi doontaa nasasho dhamaystiran iyo isku dhafka tamarta. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad xasuusato in haweenku tahay antiseptic dabiiciga ah. Neefsashada murqaha waa caawiyaha ugu fiican.
Maxaa saameynaya boric acid ma leedahay haddii ay ku dhegto dhegahaaga inta aad uurka leedahay?
Haweeney ku jirta meel xiiso leh ayaa la kulmi karta dhibaatooyinka caafimaad. Maadaama aysan ahayn mid aad u wanaagsan in aad xanuunsato oo aad qaadato daawooyinka inta aad uurka leedahay, waxaa muhiim ah in aad iska ilaaliso naftaada inta ugu badan ee suurtagal ah ee noocyada kala duwan ee xanuunka. Maqaalkani wuxuu wax ka qaban doonaa daaweynta otomaatiga haweenka uurka leh boric acid. Waxay u egtahay in muddo tobanaan sano ah daaweynta caabuqyada xayawaanka, si aan khasaare lahayn, sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa daaweynta otitis ee carruurta, laakiin ma aha.
Sida loo qallajiyo hawada guriga dhexdiisa foornada: intee in leeg iyo heerkee?
Iyadoo height of hawthorn xagaaga, geed, bilaabmaa ubax firfircoon, ku dhowaad dhammaan qaybaha kaas oo loo isticmaalo ma aha oo kaliya in cuntada, laakiin sidoo kale ujeedooyin daaweyn. Ubaxyada la qalajiyey, caleemaha iyo berry dhoobo shaaha, loo isticmaalo diyaarinta of compotes iyo decoctions. Inta badan waxaa loo isticmaalaa ujeedooyinka quruxda badan, tusaale ahaan, sida maqaarka maqaarka.
Hawthorn waxay caan ku tahay dadka jecel daawada dhaqanka. Hawthorn waa isha dhabta ah ee fiitamiinada waxtar leh, sidaas darteed lagama maarmaanka u ah quruxdaada iyo caafimaadkaaga. Hawthorn waa berrito cajiib ah, taas oo sidoo kale dhadhan fiican. Dadka waaweyn iyo carruurta labadaba waxay ku cunaan farxad. Hawthorn waxaa lagu kabi karaa sida dhulkeeda, oo si firfircoon ayuu midho u dhali doonaa, iyo duurka.
Daawadani waxaa hadda loo isticmaalaa daawada dadka iyo daawooyinka dhaqameed, iyada oo ay sabab u tahay hantidooda. Boric acid waa xal in ethanol (70%), diirada taas oo kala duwanaan karto inta u dhexeysa 0.6 - 4.5%. Qosol la'aan. Faa'iidada ugu weyn ee daawadani waa qiimo hoose oo leh saameynta ugu weyn ee isticmaalka.
Siyaabaha si guul leh loogu kaydiyo toonta jiilaalka guriga
Toonta jiilaalka waa dalag udub dhexaad ah marka loo eego kaydinta, gaar ahaan guriga. Maxay siyaabaha guriyeynta ay u maareeyaan si ay u sii wataan kahor sanadka cusub? Sida loo diyaariyo nalalka toonka loogu talagalay kaydinta muddada-dheer, iyo shuruudaha looga baahan yahay toonta jiilaalka si ay u noqoto mid cusub oo aan qalalanayn?
Miyuu boric acid waxtar u leeyahay xanuunka dhegta? Tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka daaweynta autitis
Badanaa, takhaatiirta leh cudurrada dhegta ah waxay qoraan qamriga boric ama boric acid dhegta. Dhibaatooyinka dhagaha, boric acid waa caawiye lagama maarmaan ah oo leh sifooyin qumman. Habkan waxaa loo isticmaalaa daawada muddo dheer waxayna leedahay qaabab wanaagsan. Otitis waa geedi-socod barar ah oo ka dhacaya dhegta.
Ka dhigista toonta Maqaasi waxaa loo tixgeliyaa habka ugu fiican. Haddii maqaasiinka si wanaagsan loo diyaariyey, waxba kama horjoogsan doono in toonta ay ka jiifto ilaa guga, iyo mararka qaarkood ilaa goosashada cusub. Dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa inay dhacaan sababtoo ah is-khilaafaadyada xaalad kasta oo kayd ah oo muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu leeyahay dhammaan hababka iyo hababka aad u abuuri karto xaalado ku habboon kaydinta toonta.
Sida loo sameeyo turunda leh boric acid si loo daaweeyo dhegaha, sida loo dalbado iyo intee in le'eg ay ku hayn karto kanaalka dhegta?
Dhabarka Boric-ga ee dhegta waxaa loo isticmaalaa qiyaastii qoys walba, haddii qof qoyska ka mid ahi uu dhibaato ka qabo dhegta. Si loo sameeyo daaweynta dhagaha xanuun habeenkii, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo turndochki - kuwani waa suufka qoyan oo qoyaan leh alkol boric. Tani waa hab aad u haboon oo kalsooni leh. Isticmaalka boron acid acidic acid waa mid ka mid ah hababka ugu caamsan ee daaweynta cudurrada dhegta.
Toxajinta toonta jiilaalka - hab aanad iloobin
Hooyooyinka casriga ah waxay la yimaadeen hal milyan oo siyaabood oo lagu kaydin karo khudaarta xilliga jiilaalka. Sallaar, tusaale ahaan, waxaa lagu kaydiyaa dhalooyinka, sanduuqyada, iyo xabkaha, laakiin toonta la qaboojiyey waxay leedahay nolosha shafka ugu dheer. Waxaa si fiican loogu hayaa qaybta qaboojinta ee qaboojiyaha ee qaboojiyaha oo aan meel badan ka qaadin. Ma karikar karaa jiilaalka qabowga qaboojiyaha?
Sida loo xoqdo toonta guriga ee hawada, foornada iyo korontada?
Garlic waa khudradda oo si sax ah loogu yeeri karo alaab guud oo ka mid ah noocyo kala duwan oo ah suxuunta kala duwan. Caadi ahaan, toon cusub ayaa loo isticmaalaa karinta, laakiin marar badan waxaa laga heli karaa qaab la jajabiyey oo la qalajiyey. Toonta la qalajiyey ayaa aad u sahlan in la keydiyo waxaana la heli karaa sanadka oo dhan.
Sidee loo ilaaliyaa pear cusub cusub xilliga qaboobaha guriga?
Dayrtu waxay ahayd mid bacrin ah, oo miyuu goosanayaa miro kulul? Diyaargarowga lagama maarmaanka ah ee qaabka miraha la qalajiyey ee isteroberi iyo miraha la qalajiyey ayaa mar hore la sameeyay, laakiin weli ma jiraan miro badan? Miyaa macquul ah in guriga lagu hayo midho cusub? Maxay tahay iyo sida loo xafiddo isjugsiyada? Muddo intee dhan ah? Oo ma jiri doonaa wax faa'iido u leh?
Ilaalinta miraha xilliga jiilaalka: sida loo qalajiyo isteroberyaha qoraxda saxda ah?
Miro qalalan waa hab weyn oo loo ilaaliyo dhadhanka iyo guryaha waxtarka leh muddo dheer, tani waxay si gaar ah u tahay runta - ma aha wax adag in lagu caajiso midhaha xagaaga ee jiilaalka dheer iyo qabow. Waxaad sameyn kartaa wax-qabad cajiib ah, gooyo iyo fusoyin laga helo miraha qalalan, ku dar suuqyo kala duwan, tusaale ahaan, naaneyska, dabcan, isticmaal wax walba oo sidan oo kale ah.
Ka dooro kuwa ugu fiican, sida loo dhigo toonta xilliga jiilaalka: qaboojiyaha ama bangiyada?
Garlic waa dheecaan aad u fiican ee suxuunta aad jeceshahay. Waxay ku siinaysaa dhadhanka basbaaska iyo kiriimka cuntada. Waxaa loo adeegsadaa karinta iyo daawada dhaqameed, waxaa loo baahan yahay jikada oo waa fiicantahay tufaaxa tayo fiican. Waxaa lagu kaydiyaa wakhti dheer oo aan ka sii darin, laakiin kaliya xaaladaha oo dhan. Maqaalkani waxa aanu ka hadli doonaa sida loo kaydiyo toonta guriga ee guri dabaq ah?